Malunga nathi - iiHangzhou ezingcono zeMihla ngemihla zeMveliso Co, Ltd.
Iimveliso zeMihla ngemihla ezingcono zeLife, Ltd.
Yasekwa ngo-2015 Singabantu inkampani inxaxheba OEM kunye nemveliso ODM iimveliso ukusetyenziswa ngemihla.
Umenzi wobungcali wokusula okumanzi.
Sigxila kuphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kweesuli ezimanzi zeendidi ezahlukeneyo. Iindidi zethu zokusula ezimanzi zibandakanya ukusula utywala, ukusula iintsholongwane, ukucoca, ukusula izithambiso, usula usana, ukusula imoto, ukusula kwezilwanyana, ukosula ikhitshi, ukosula okomileyo, ukusula ubuso, njalo njalo. isicoci sesandla kunye neemaski. Sinikezela ngeenkonzo ezenzelwe wena zabaxumi bethu. Sijolise kwimigca emithathu eyahlukeneyo yeshishini ezisa amanqanaba aphezulu exabiso kubathengi bethu ngokungafani nenye inkampani yeekhemikhali. Imotto yethu yokudibana ithi "uKhuseleko, iR & D kunye neNkonzo".
Sineelayisensi zokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle. Ilungelo lokuthumela ngaphandle iimveliso zethu liqinisekisiwe. Iimveliso zethu zibhaliswe kwi-EPA, i-FDA, i-MSDS, i-EN, i-CE kunye nezinye izatifikethi. Ukuba uneminye imfuno yesatifikethi, sikulungele kakhulu ukubonisana nawe ukuze sigqibe;
Iimveliso zethu lithunyelwa kulo lonke ihlabathi. Sizimisele ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo kuphawu ngalunye.
Imveliso yansuku zonke eNgcono. Sifumene indumiso eninzi kubathengi ngenkonzo yethu ekhawulezayo nenokucinga ngenxa yeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye neqela lokuthengisa elisebenzayo.
INGCACISO ibonelela ngamanqanaba enkonzo agqwesileyo kwaye ixhaswa ngamaxabiso ethu okuthembana, ukuthembeka kunye nomnqweno womgangatho. Yiyo loo nto uninzi lwabathengi bethu bethembekile iminyaka emininzi. Sisoloko senza umsebenzi omkhulu.